Shabaab oo xabsiga u taxaabay kooxo burcad badeed ah | raascasayrmedia.com
← Taliyeyaal cusub oo loo magacaabay ciidamada Milateriga iyo Booliiska Dowladda KMG ah ee Soomaaliya
Taliska booliska Puntland oo xilka qaadis sameeyey →
March 29, 2011 · 5:48 pm
Shabaab oo xabsiga u taxaabay kooxo burcad badeed ah
Ciidamada Xarakada Al Shabaab degmada Xarardheere ee gobolka Mudug ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dad farabadan oo ay ku eedeeyeen inay yihiin burcad badeeda Soomaalida.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo degmada Xarardheere ee gobolka Mudug, Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa maanta magaaladaasi waxaa ay ku xir xireen in ka badan 50-ruux oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxaha burcad badeeda Soomaalida.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi raacinayaan in aroonimadii hore ee saakay ilaa iyo barqonimadii maanta ay gaaf wareegayeen Magaalada Ciidamada Xarakada Al Shabaab iyadoo shaaca ka qaaday in raga ay gacanta ku dhigeen ay yihiin burcad badeeda islamarkaana magaalada Xarardheere ay ku isticmaali jireen waxyaabaha maanka dooriya.
Mid ka mid ah dadka degamada Xarardheere oo la hadlay Idaacadda Shabelle ayaa waxaa uu sheegay in saakay ciidamada Shabaab ay baaritaano adag ka sameeyeen gudaha magaaaladaasi islamarkaana dadkii ay gacanta ku dhigeen ay haatan ku xiran yihiin xabsi ku yaala magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug.
Goobjoogahaasi ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in haatan gudaha degmadaasi laga dareemayo dhaq dhaqaaq ciidan oo ay samaynayaan ciidamada Shabaabka, iyadoo kooxaha burcad badeeda Soomaalida ee ku sugan gobolkaasi ay wadaan abaabulo ay kaga hortagayaan xariga maanta loo gaysta raga Xarakada Shabaab ay ku eedeeyeen burcad badeednimada.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Al Shabaab degmada Xarardheer ee gobolka Mudug oo ku aadan xariga maanta ay kula dhaqaaqeen dadka ay ku eedeeyeen inay ahaayeen burcad badeed islamarkaana waxyaabaha maanka dooriyaha soo galiyay degmadaasi.